Computer Technical Notes & Sharing Softwares: Webs နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုလုပ်ကြမယ်
ကြိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့ Portable လုပ်ပစ်မယ်
memory စတစ်ကို format ချင်တောင်မှမသေတဲ့ virous ၇ှိ...
ဂျီမေလ်းပက်ဝေါ့ကိုဘယ်လိုဖောက်မလဲ ( Gmail Fack Logi...
iOS5Install နည်း
မိမိပုံ နောက်ခံ နဲ့ Gmail
Windows Password နှင့် အခြား User Password မေ့သွား...
gtalk မှာ သုံးပြီး ကိုယ့်နာမည်မပေါ်အောင်
LINUX OS (Ubuntu-11.04) နှင့် သူ၏အကြောင်းတစ်စေ့တစ်...
Webs နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုလုပ်ကြမယ်
ကိုယ်လိုချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုရွေးပြီး၊ Password ပေး၊ Createawebsite လို.ပြောပေးပါ။
1 step မှာ အကောင့်ဖွင့်ဖို. site Title တို. မေးလ် လိပ်စာတို. ဘာညာကွိကွ ထည့်ပါ။ မေးလ်လိပ်စာတော့ အမှန်ပေးပါ။
2 step မှာ style တွေ အများကြီးရှိပါတယ် စာမျက်နှာတွေ လည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ကလစ်တစ်ချက်လုပ်ပေးပါ။
I agree of the team of service ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေး ထည့်ပေးပြီး Create My site ကိုနှိပ်ပေးပါ။
တစ်ယောက်တည်း ဒီဆိုဒ်ကို လုပ်မှာဆိုရင်တော့။ Personal ကိုပဲရွေးပေါ့။ နတ်ဝတ်တစ်ခုအနေနဲ. ဖိုရမ်တွေရေးကြမယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေ share ကြမယ်ဆိုရင်တော့ အလယ်က Clubs and Group ကို ရွေးပေးပေါ့။ အဲဒီမှာ Basic ကိုရွေးပေးရင်တောင် တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီ။
Typeatitle here ဆိုတဲ့နေရာမှာတို. start typing here ဆိုတဲ့နေရာမှာတို. ကိုယ်ကြိုက်တာရေးပါ။
ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်နားက publish ဆိုတာကိုနှပ်ပေးပါ။
Continue Editing ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
တခြား စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ who we are တို. ဘာတို. ညာတို. အစရှိတဲ့ စာမျက်နှာ်တွေကိုလည်း ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရေးပါ။ အဲဒီ who we are တို.လို. Tab Menu တွေကို လည်း နာမည်ချိန်းလို.ရသေးတယ်နော်။ အဲဒါက အအောက်မှာရှင်းပြထားတယ်။
sidebar ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာဘက်အပေါ်နားက sidebar ကိုကလစ်လုပ်ပြီး Enable Sidebar လို.ပြောပေးရပါမယ်။
ဘယ်ဘက်အပေါ်နားက Page Option ဆိုတဲ့ဘေးက မြှားလေးကို ဖွင့်လိုက်ရင် Background image တို. Background music တို. ထည့်လို.ရတဲ့ နေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ password protect ဆိုတာကတော့ ကိုယ်က ဘယ်စာမျက်နှာတွေကို အကောင့်ဖွင့်စရာမလိုပဲ ကြည့်လို.ရစေချင်ပြီး ဘယ်လို စာမျက်နှာတွေကိုတော့ ယူစာနာမည်နဲ. ပါတ်စ၀တ်ရိုက်ပြီးမှာ ၀င်လို.ရစေချင်လည်း ဆိုတာသတ်မှက်ပေးတာပါ။ ဥပမာ ဖိုရမ်လို ဟာမျိုးကြရင် အကောင့်ဝင်မှသာ ၀င်ကြည့်လို.ရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှက်ပေးတာပါ။ Delete Page ဆိုတာကတော့ အခုရောက်နေတဲ့ စာမျကနှာကို ဖျက်ပြစ်တာပါ။
ဒါကတော့ ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ စာမျက်နှာတွေကို အဲဒီကနေလည်း သွားပြင်လို.ရပါသေးတယ်။
address bar မှာ www.webs.com လို.ရိုက်ပြီး အန်တာခေါက်ပါ။
အခုဆိုရင် ဖိုရမ်ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတွေ ထပ်ထည့်ချင်လား၊ Vedio ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတွေ ထက်ထည့်ချင်တလား။ ကလစ်ချက်နှပ်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အခုလောလောဆယ် Forum ကို နှပ်ကြည့်မယ်။
ဟောကြည့် Forum ဆိုတဲ့ Menu လေး ရောက်သွားပါပြီ။ ခဲ့တံပုံလေးကို အဲဒီ စာမျက်နှာ ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် နှပ်ပေးရပါမယ်။ မှန်ဘီလူးပုံးလေးကု အဲဒီ စာမျက်နှာကို ကြည့်တာပါ။ T လေးကတော့ အဲဒီ စာမျက်နှာ န်ာညကိုချိန်းတာပါ။ အရင်က ပေးတားတဲ့ who we are တို. ဘာတို.ကို ဒီမှာလာချိန်းလို. ရပါတယ်။
အလုံးပြီးသွားရင်တော့ ညာဘက် အပေါ်နားမှာ Vies my site ကို ကလစ်လုပ်ပြီး ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ၀တ်ဆိုဒ်ကို ပြန်ကြည့်လို.ရပါတယ်။
Manage Froum တွေထဲသွားပြီး မန်ဘာတွေကိုသတ်မှက်ပေးလို.၇တယ်ဗျာ။
Posted by SLIP at 1:17 PM
htoo myat tun said...
ကျွန်တော်ကအဲဒီ Website ကိုသိတာကြာနေပြီဖွင့်လည်းဖွင့်
But Now အဲဒီ Website ကို Open လို့ မရတော့လို့
အဲဒီလိုဖြစ်တာ What ကြောင့်လဲမသိဘူး
My Website က Hear
mg danu said...